अमेरिकाको स्टोरमा किन मारिन्छन् नेपाली ? कसरी बच्ने ? (१७ टिप्स) « Khasokhas Follow @khasokhasmag
– अमित अभय अधिकारी
आयो टप्प टिप्यो मिती पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो …...सायद यो भनाईको रचना मृत्युको कहालीलाग्दो दृश्य कल्पना गरेर त्यसलाई थामथुम गर्न गरिएको थियो होला । हुन त आफन्तलाई त यो भनाईले के असर गर्ला र ? जसले आफ्नो सन्तान, आफ्नो काख अनि आफ्नो आड, भरोसा गुमायो उसले यो भनाई पढेर मनन त गर्ला तर विपतको वेला आफ्नो संसार कापेको बेला के उसले यो भनाईले मन बुझाँउला ? यो पक्तिकारलाई त कत्तिपनि विश्वास छैन ।